Aragtida Sheekooyinka UnCommission - The UnCommission
In ka badan 500 oo dhallinyaro ah oo dalka oo dhan ah ayaa la wadaagay waayo-aragnimadooda sayniska, tignoolajiyada, injineernimada, iyo xisaabta iyada oo loo marayo UnCommission, iyagoo siinaya khibradahooda xiisaha, farxadda, iyo rayn-rayntooda, iyo sidoo kale cabsi-gelinta, naxariis-darrada, iyo takoorka. Sheekooyinkani waxay iftiiminayaan sinnaan la'aanta iyo caqabadaha nidaamka waxbarashada iyagoo sidoo kale tilmaamaya meelo rajo ah. Iyaga, waxaan ka soo saareynaa mawduucyo iyo qaabab hagi doona aqoonsiga yoolalka mustaqbalka ee waxbarashada STEM iyo fursadaha.
Maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan wadaagno 12 fikradood oo ka soo baxaya sheekooyinkan, oo loo qaybiyay afar mawduuc, oo ay weheliso taxane sawireed oo ay dhiirigelisay fikradahan. (U gudub dhamaadka boostada si aad u aragto sawiradan oo cabbirkoodu dhan yahay.) Farshaxan Emily Jane Steinberg wadaagaan: "Waxaan doortay halbeegga ciyaarta doorka si aan u matalo mawduucyada asaasiga ah ee ka soo baxaya shaqada UnCommission. Arday kasta safarkiisu waa mid gaar ah, fursadna waxay door weyn ka ciyaartaa natiijooyinkooda, laakiin dhammaadka maalinta, garoonku weli waa uu jiraa. Maxaa dhacaya haddii ciyaartoyda laftoodu ay sameeyaan sharciyada? Maxaa dhacaya haddii waxbarashada STEM ay udub dhexaad u tahay waayo-aragnimada nolosha ee ardayda?"
Wax badan ka baro aragti kasta iyo waxa aan ka maqalnay sheeko-yaqaannada halkan. Toddobaadyada soo socda, waxaanu wadaagi doonaa nuance dheeraad ah oo ku saabsan fikradahan.
Aragtida ku xeeran Dareenka Sheekooyinka
Aragtida 1: Si ay u horumaraan, ardaydu waxay u baahan yihiin inay yeeshaan dareenka lahaanshaha iyo ka mid noqoshada markay u socdaan waayaha STEM.
Aragtida 2: Ardayda qaarkeed, waayo-aragnimada STEM waxaa ka buuxay shucuur wanaagsan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin raaxaysi, xamaasad, raynrayn, iyo kibir, dareemadan ayaa isbeddel ku sameeyay sida ardaydu u garteen STEM iyo socdaalkooda waxbarashada STEM.
Aragtida 3: Ardayda qaarkeed, dareenka jaahwareerka, walbahaarka, iyo murugada ayaa u badnaa khibradahooda fasalka STEM. Macnaha guud ee barashada fasalka, kaas oo ka baxsan kaliya diiradda saaraya nuxurka, ayaa door muhiim ah ka ciyaartay safarrada STEM ee ardayda. Xoojinta shucuurta xunxun ee ardaydu waxa ay saamaysay aaminsanaanta awooda ay u leeyihiin inay ku koraan ardayda STEM.
Waxa laga yaabaa in aan fasalka saddexaad ama afraad ku jiro in aan uun tabayo maalin runtii muhiim ahayd, mana awoodin in aan ka soo kabsado ama aan ka soo kabsado maalintaas i seegtay. Waxa aan dareemay in ay iga maqan tahay qayb macluumaad ah, waligayna, weligay kuma fikirin.
Aragtida ku xeeran Waayo-aragnimada Fasalka
Aragtida 4: Marka macalimiintu ay la sameeyaan xiriir taageero oo ka baxsan waxbarashada, ardaydu waxay dareemaan in la arkay lana maqlay, ma aha oo kaliya kuwa wax barta, laakiin sida dadka.
Aragtida 5: Macallimiinta muujiya hamigooda STEM waa isha dhiirigelinta ardaydooda.
Aragtida 6: Ardaydu waxay la kulmaan dareen raynrayn iyo xiiso leh marka macalimiintu adeegsadaan wax-barashada STEM ee kala duwan.
Aragtida 7. Mashaariicda STEM ee wada shaqayntu waxay noqon karaan kuwo ay ka buuxdo xiisad ama farxad.
Waxa aan gaadhay fasalka 11-aad iyo 12-aad markii aan ugu dambayntii helay macallin gacmahan ku qabtay, sida mashaariicda injineernimada oo kale. naqshadeey trebuchet...si aad macalinkayaga wejiga ugaga dhufato sida roodhida yar yar iyo alaabta. Taasina runtii aad ayey ii xiisaynaysay taas, xoogaa injineernimada ah...arkitaan la mid ah, codsiga dhabta ah ee xisaabta markii ugu horreysay…. 16 jir ayaa ahaa nooc maskaxeed oo afuufaya...macalimiin ayaa ii sheegay.. ., 'Oh, waxaad isticmaali doontaa xisaab…' laakiin waligey runtii ma fahmin…
Aragtida ku xeeran Asalkii hore/Aqoonsiga Sheeko-sheegaha
Aragtida 8: Arday badan oo dumar ah ayaa la kulma galmo-galmoodka fasallada STEM. Dumarka qaarkood, tani waxay u horseedaa korodhka dareenka adkeysiga iyo xoojinta marka ay ka soo horjeedaan filashooyinka dhaqameed ee jira iyo fikradaha khaldan. Kuwa kale, khibradahani waxay si xun u saameeyaan qiimahooda.
Aragtida 9: Arday badan ayaa la kulma cunsurinimo fasalada STEM. Tani waxay saameyn xoog leh ku leedahay labadaba maskax ahaan iyo cilmi ahaanba.
Aragtida 10: Waalidiinta/mas'uuliyiinta waxay leeyihiin heerar khibradeed oo kala duwan STEM taasoo saameynaysa safarrada waxbarashada STEM ee ardayda. Ardeydu waxay mararka qaarkood u sababeeyaan kala duwanaanshaha dhaqameed ee sida STEM wax loo baro.
Maqaarkayga brown iyo hiddaha reer Brazil waxay jahawareeriyeen ardaydii aan isku fasalka ahayn waxayna ka cadhaysiiyeen macalimiintayda, taasoo iga dhigtay bartilmaameed ay ku majaajiloodaan asxaabta iyo macallimiinta si isku mid ah. Macallinkaygii fasalka labaad ayaa saamayntii ugu ballaadhnaa igu yeeshay. Waxay ii dirtay Ingiriisi imtixaan Luqad Labaad ah inkastoo aan tusaale u ahaa in Ingiriisku yahay afkeyga hooyo, waxay igu qasabtay inaan joogo xilliga fasaxa iyo goor dambe oo dugsigu dhammaaday si aan "dib ugu barto" sida qalinka loo qabsado, waxayna calaamadisay jawaabahayga. sida khaldan shaqada gurigayga xisaabta xitaa markaan qoray jawaabta saxda ah.
Aragtida ku xeeran xiisaha STEM
Aragtida 11: Khibradaha caruurnimada sida la kulanka dunida dabiiciga ah, tijaabinta, ku ciyaarista alaabta caruurtu ku ciyaarto, iyo ka qayb qaadashada mashaakilaadka xisaabta ee adag ayaa u horseeda ardayda qaar in ay yeeshaan xiisaha STEM. Si kastaba ha ahaatee, soo-gaadhista qasab maaha inay u horseeddo xiisaha dhammaan ardayda.
Aragtida 12: Ardaydu waxay doortaan inay sii wataan xirfadaha STEM sababo kala duwan dartood. Qaar ka mid ah, waa hab lagu soo celiyo, kuwa kalena, waa hab lagu sii wado xamaasadda iyo jacaylka STEM inta ay nool yihiin.
Markii ugu horeysay waxaa la i baray STEM maadaama aan aad ula dhacay tareenada Thomas & Friends oo aan doonayay in aan noqdo kaari MTA ah da'da todobada sano. Dabadeed, markii aan bilaabay barashada isu-geynta, kala-goynta, isu-qaybinta, isku-dhufashada, iyo tirooyinka maalmihii dugsigeyga hoose, waxaan bilaabay inaan xiiseeyo xisaabta.
Sawirro cabbir buuxa: